मेरो श’व आमालाई दिनु’ भन्ने नोट लेखेर गइन यी युवती …. – PathivaraOnline
Home > समाचार > मेरो श’व आमालाई दिनु’ भन्ने नोट लेखेर गइन यी युवती ….
admin October 29, 2020 समाचार	0
जंगलको रुखमा झु ण्डिएको अवस्थामा मृ’त फेला परेकी युवतीको अझै सम्म पनि पहिचान हुन सकेको छैन । उनका आफन्त पनि कोही सम्पर्कमा आएका छैनन् । मोरङको बेलबारी नगरपालिका १० स्थित सिर्जना सामुदाकिय बनको रुखमा उनी झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेकी हुन् । उनको पहिचान खुल्ने कुनै कुरा छैन । शव नजिकै प्रहरीले ‘मेरो शव आमालाई जिम्मा दिनु’ भन्ने नोट लेखेको फेला पारेको छ ।
देखेर पनि नदेखेको जस्तो बेवास्ता नगर्नु होला ॐ लेखेर Share गर्नुस अधुरो काम बन्नेछ।
भाग्यले त बचायो, तर परिवार सबैलाई पहिरोले बगाएपछि यसरी भक्कानिइन सुष्मा!
नेपाली सँगीतका नक्षत्र एकाएक बाग्मती किनारमा यसरी अस्ताए… (भिडियो सहित)
श्री पाथिभरा माताको दर्शन गरि बैशाख २४ गते शुक्रबार तपाईंको राशिफल यस्तो छ भाग्यफल हेर्नुहोस्
उनले मेरो हात स मा ईन भने अर्कीले खु ट्टा, ….त्यसपछि त'न्का'एर का'टि'दिए!
अन्तिम संस्कार गरेर घर फर्किँदा मृतकले नै फोन गरेपछि
गेष्टहाउसमा काम गर्न गएकि युवतीलाई जब कोठा भित्र राखेर यस्तो जे गर्न लगाए...